သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: July 2007
မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းမှ မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်သည့် မော်လမြိုင်မြို့လေးတွင် ပုလိပ်အရာရှိတစ်ယောက် အနေနှင့် ကျွန်တော် တာဝန်ကျနေသော ကာလများတွင်ဖြစ်သည်။ မြို့ခံလူတွေ၏ ဥရောပတိုက်သားများအပေါ်တွင် ထားရှိသည့် ခါးသက်သက် အမုန်းတရားများကို ကျွန်တော် ခံစားနေခဲ့ရသည်။ မြို့ခံများက သူတို့၏ အမုန်းများကို ထုတ်ဖော်ပြသည့် အနေနှင့် လူဖြူအမျိုးသမီးတစ်ဦးတစ်လေ ဈေးထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ လျှောက်သွားဖြစ်သည့် အခါများတွင့် ပါးစပ်အတွင်းမှ ကြံရည်နှင့် ထိုအမျိုးသမီး၏ ဂါဝန်ပေါ်သို့ ပြစ် ကနဲမြည်အောင် ထွေးထုတ်တတ်ကြသည်။ နယ်ချဲ့ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားအတွင်းထဲက ကျွန်တော့်ကိုလဲ အခွင့်သာလျှင်သာသလို မကြားတကြား စောင်းမြောင်းပြောဆို၊ အရှက်ခွဲတတ်ကြသေးသည်။
ဘောလုံးကန်သည့်အခါများတွင် တစ်ဖက်လူက မသိမသာခြေထိုးလို့ ကျွန်တော် မှောက်လျက်လဲသည့်အခါများတွင် ကွင်းလယ်ဒိုင်က မမြင်ဟန်ဆောင်က အခြားတစ်ဘက်သို့ ကြည့်နေတတ်သလို၊ ပရိတ်သတ်က အုန်းအုန်းကြွက်ကြွက်ညံအောင် ရယ်မောတတ်ကြသည်။
ထိုသို့ မကြားတကြား စောင်းမြောင်းပြောဆိုခြင်းများက သူတို့၏ မုန်းတီးမှုများ၊ ခံစားချက် အစစ်အမှန်များကို ဆန္ဒပြပွဲများ အနေနှင့် ပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ဖော်မပြရဲကြခြင်းများ၏ ပြယုဒ်များသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်မလှမ်းမကမ်းရောက်သွားမှ ထိုလူဝါများက ထိုးကွင်းထကာ စောင်းမြောင်းပြောဆိုခြင်းများက ကျွန်တော့ကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ အဆိုးတကာ့အဆိုးဆုံးက ရဟန်းပျိုများပင်ဖြစ်သည်။ ကျဉ်းမြောင်းလှသည့် သည်မြို့ကလေးမှာ ရဟန်းပျို ဦးရေက ထောင်နှင့်ချီရှိသည်။ ထိုရဟန်းပျိုများသည် တစ်နေကုန် ဘာအလုပ်မျှ မလုပ်ပဲ လမ်းထောင့်များတွင်ရပ်ကာ ဥရောပတိုက်သားများကို လှောင်ပြောင် ပြက်ရယ်ပြုနေတတ်သည်။
တစ်ကယ်တော့ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်ကို တိတ်ဆိတ်စွာ ရွံ့မုန်းနေသည့် ကျွန်တော့ အဖြစ်ကိုတော့ မည်သူမျှသိမည်မထင်။ မြန်မာလူမျိုးတွေဘက်မှနေ၍ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားများကို သီအိုရီနည်းအရကော၊ ထုတ်ဖော်မပြ၀ံ့သည့် တိုးတ်ိတ်မှု တစ်ခုအနေနှင့်ပါ ဆန့်ကျင်နေခဲ့သည့် ပညာအဆင့်အတန်း သိပ်မမြင့်မားသည့် ပုလိပ် အရာရှိတစ်ယောက်အနေနှင့်သာ ကျွန်တော်၏့ နေ့ရက်များကို မော်လမြိုင်မြို့လေးတွင် ကုန်ဆုံးစေခဲ့သည်။ ကိုလိုနီအင်ပါယာ၏ ယုတ်မာမှုများကို အနီးကပ်မြင်တွေ့နေရသည့်အတွက်လဲ ခါးသည်းစွာ ပိုလို့မုန်းတီးနေခဲ့မိသည်။ ကျဉ်းမြောင်းနံစော်လှသော အချုပ်ခန်းအတွင်းမှ ပိန်လိန်ခြောက်ကပ်နေသော မြန်မာများ၏ မျက်နှာများ၊ အ၀တ်မပါသည့် တင်ပါးကို ကြိမ်လုံးနှင့် ရိုက်နှက်ခံထားရ၍ အမာရွတ်များပွထနေသော အချုပ်သားများကို မြင်တိုင်း အပြစ်ရှိသလို အမြဲခံစားနေခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်လိုပဲ ပညာအဆင့် သိပ်မမြင့်သည် အင်ပါယာ၏ အလယ်အလတ်တန်းစားများ၏ ရင်ထဲတွင်လဲ ထိုကဲ့သို့ပင် ခံစားနေရမည်ထင်သည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် အင်ပါယာကြီး တိတ်တဆိတ်ကျဆုံးနေသည်ကိုလဲ မသိခဲ့ကြ။ ဗြိတိသျှ-အိန္ဒိယ အင်ပါယာကြီးသည် အဆုံးမရှိသော၊ အဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားများကို ဦးချိုးထားသော အာဏာရှင်စနစ်တစ်ခု။ ထိုစနစ်ကို ရွံမုန်းခြင်း၊ လက်အောက်ခံတိုင်းပြည်အတွင်းမှ တိုင်းသူပြည်သားများနှင့် ဆက်ဆံရသည်မှာ လက်ပေါက်ကပ်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ရဟန်းရှင် တစ်ဦး၏ ၀မ်းဗိုက်တွင်းသို့ လှံစွပ်ဖြင့်ထိုးသတ်လိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများကို နေ့စဉ်နှင့် အမျှ ခံစားကြုံတွေ့နေရသည်။ သည်အရာများသည် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်၏ ဘေးထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။ အခြားအင်ဂလို-အင်းဒီးယန်းများလဲ ကျွန်တော့်ကဲ့သို့ပင် ခံစားရမည်ကို တပ်အပ်ပြောနိုင်သည်။
ထိုနေ့က မော်လမြိုင်မြို့လေးတွင် သေးငယ်သော အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု ဖြစ်သွားသည်။ ကြီးမားသည့်အရာ တစ်ခု မဟုတ်ပေမယ့် ကိုလိုနီစနစ်၏ အခြေအနေမှန်ကို ဖော်ကျူးလိုက်နိုင်သော၊ အာဏာရှင်စနစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်တစ်ခုကို ကန့်လန့်ကာလှစ်ကာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မြင်သာစေသော နေ့ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ နံနက်စောစောက မြို့တစ်ဘက်ခြမ်းရှိ နယ်မြေပုလိပ်အရာရှိက ဈေးထဲတွင် ဆင်တစ်ကောင် သောင်းကျန်းနေသည်ဟု ဖုန်းဆက်၍ သတင်းပေးလာသည်။ လာရောက်ဖြေရှင်းပေးရန် ပြောသဖြင့် ၀င်ချက်စတာ ပွိုင့်လေးဆယ့်လေး ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကိုဆွဲပြီး မြင်းတစ်ကောင်နှင့် မြို့တစ်ဖက်ခြမ်းသို့ ခရီးနှင်ခဲ့သည်။ သေနတ်ကိုင်၍ ထွက်ခဲ့သော်လည်း ဆင်ကိုသေနတ်နှင့် ပစ်ရန် မရည်ရွယ်၊ ခြောက်လှန့်ရုံလောက်အနေနှင့်သာ သေနတ်ဆွဲ၍ ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဒီသေနတ်က ဆင်သေနိုင်လောက်အောင် အစွမ်းထက်သော သေနတ်လဲမဟုတ်။
လမ်းမှာတွေ့သမျှ နယ်ခံများက ဆင်အကြောင်း တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောပြကြသည်။ သည်ဆင်က တောဆင်ရိုင်းတစ်ကောင်မဟုတ်။ မုန်ယိုနေသော ဆင်ယဉ်တစ်ကောင်သာဖြစ်သည်။ မုန်ယိုနေသဖြင့် သံကြိုးနှင့် ချည်ထားသော်လည်း ညက သံကြိုးကို ဖြတ်တောက်ထွက်ပြေးသွားသည်ဟုဆိုသည်။ ဆင်ထိန်းကလဲ ခရီးလွန်နေသဖြင့် ၁၂နာရီကွားဝေးသည့် အရပ်ဒေသတစ်ခုတွင် ရောက်နေသည်ဟု သတင်းရသည်။ နယ်ခံများတွင် လက်နက်ကိရိယာ တစ်စုံတစ်ခု မရှိသောကြောင့် ဆင်၏ ရန်ကို မကာကွယ်နိုင်ကြ။ လောလောဆယ်တော့ ထိုဆင်ကြောင့် ၀ါးအိမ်တစ်အိမ် ပြားချပ်သွားသည်။ နွားတစ်ကောင်သေဆုံးသွားသည်။ မြို့တွင်းက ကုန်စိမ်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုမှောက်လှန်ကာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊် အသီးအနှံများကို စားသောက်သွားသည်။ မြူနီစပယ်ပိုင် အမှိုက်ကားကို မှောက်ရန်ကြိုးစားသဖြင့် ကားမောင်းသူက ဖနောင့်နှင့်တင်ပါး တစ်သားထဲကျအောင် ထွက်ပြေးသွားသည့် အချိန်တွင်တော့ အမှိုက်ကားကို စိတ်ရှိတိုင်း မွေ့ယမ်းနေခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။
ထိုနေ့က မိုးဦးကျစမို့ မိုးရိပ်မိုးငွေ့နှင့် အိပ်စပ်စပ်ဖြစ်နေသည်။
ဆင်သောင်းကျန်းသွားသည်ဆိုသော ကွာတားကိုရောက်သည့်အခါတွင် မြန်မာလက်ထောက် အင်စပက်တာများနှင့် အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ ကျွန်တော့အားစောင့်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကွာတားက အုန်းလက်မိုး၊ အုန်းလက်ယက် ၀ါးတဲတဲသာသာ သာဖြစ်သည်။
အနီးအနားရှိ လူများကို အနည်းငယ်မေးစမ်းသည့်အခါတွင်လဲ ထုံးစံအတိုင်း ဘာမှ တိတိကျကျ အဖြေမပေးနိုင်ကြ။ ဒါတွေကလဲ အရှေ့တိုင်းတွေမှာ ကြုံလေ့ရှိသည့်အရာတစ်ခု။ အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုသည် အဝေးမှကြားရလျှင် တိကျပြတ်သားနေတတ်ပြီး၊ အနီးရောက်လာလေလေ မတိကျ၊ မပြတ်သား၊ေ၀၀ါးသွားလေလေဖြစ်သည်။ လူအချို့က တောင်ဘက်သို့ ဆင်ထွက်သွားသည်ဟုဆိုသည်၊ အချို့ကလဲ မြောက်ဘက်သို့ ဦးတည်သွားသည်ဟုဆိုသည်၊ အချို့ကတော့ ကနေ့အဖို့ ဘယ်ဆင်အကြောင်း ဘာမှတောင် မကြားသေးဟုဆိုသည်။
ထိုအချိန်တွင် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ အော်သံအချို့ကြားလိုက်ရပြန်သည်။ ဘာအလိမ်အညာတွေများ ပေါ်လာပြန်ပြီလဲဟု စိတ်ထဲမှတွေးလိုက်မိသည်။
“သွားစမ်း.. ဒီကလေးတွေ၊ ထွက်သွားကြစမ်း၊ ဒီနားမလာကြနဲ့”
အော်သံနှင့်အတူ၊ တဲနောက်မှ အ၀တ်မပါ လုံးတီးကလေးလေးများပြေးထွက်လာသည်။ သူတို့၏နောက်မှ မိန်းမတစ်ဦးကလဲ ကြိမ်လုံးတယမ်းယမ်းနှင့် ကလေးများကို မမြင်သင့်သည်ကို မမြင်လိုဟန်နှင့် ကြမ်းတမ်းစွာ မောင်းထုတ်အော်ဟစ်ရင်း ပြေးလိုက်လာသည်။ ထိုမိန်းမနောက်မှလဲ အခြားမိန်းမများက စုတ်တသပ်သပ်နှင့် ရင်ဘတ်ဖိလျှက် ထပ်ကြပ်မကွာ ပြေးလိုက်လာကြသည်။ တဲများနောက်ဘက်သို့ ပတ်ကြည့်သောအခါ ရွံ့ထဲတွင် အကျီ င်္ဗလာနှင့် လဲကျသေဆုံးနေသော ဒရာဗေးယီးရန်းနွယ်ဝင် အိန္ဒိယ ကူလီတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ဆင်က ထိုကူလီနောက်မှ ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး နှာမောင်းနှင့် ရစ်ပတ်မြှောက်ချီ၊ မြေပြင်ကိုပစ်ချပြီး ခြေနှင့်နင်းသတ်သွားသည်ဟု ဆိုကြသည်။ မိုးရာသီမို့ စိုစွတ်နေသော မြေပြင်ထဲတွင် ကူလီ၏ကိုယ်ခန္ဓာက မြုပ်ဝင်လျှက်၊ လည်ပင်းလိမ်လျှက် ဝေဒနာခံစားလျှက် သေဆုံးသွားသည့် ထိုသူ၏ မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရသည်။ ထိုသူ၏ ကျောကုန်းပေါ်က အရေခွံကလဲ ဆင်ခြေထောက်ဒဏ်ကြောင့် အရေခွံကွာနေခဲ့သည်။ ဤမြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်သည်နှင့် အခြေအနေမဟန်မှန်းသိလိုက်သဖြင့် ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို သူငယ်ချင်း၏ ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကို သွားယူခိုင်းလိုက်သည်။ ဆင်နံ့ရလို့လန့်ပြီး ကျွန်တော့ကို သူ့ကျောကုန်းပေါ်မှ ခါချမည်ကို ကြိုတင်တွေးထားမိလို့လဲ ကျွန်တော်၏ မြင်းကိုပါ တစ်ပါတည်း အိမ်ပြန်ပို့ခိုင်းလိုက်သည်။
သေနတ်သွားယူသောကောင်လေး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ရိုင်ဖယ်သေနတ်၊ ကျည်ကပ် ငါးကပ်ဖြင့် ပြန်ရောက်လာသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကိုက်အနည်းငယ်ကွာဝေးသော စပါးခင်းထဲတွင် ဆင်ရှိနေသည်ဟု လူအချို့ကပြောလာသည်။ ကျွန်တော် စပါးခင်းဘက်သို့ ခြေဦးလှည့်လိုက်သည်။ သေနတ်ကို ပုခုံးပေါ်ထမ်း၍ ဆင်ရှိရာ စပါးခင်းဘက်သို့ ထွက်လာသော ကျွန်တော်၏နောက်တွင် လူအုပ်ကြီးက ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါလာကြသည်။ သူတို့၏ တဲအိမ်များကို ခြေဖျက်ခဲ့သည့်တိုင် ဆင်ကို သိပ်စိတ်ဝင်စားပုံမပြသော လူအုပ်ကြီးက ကျွန်တော် ဒီဆင်ကို သတ်တော့မည်ဟူသော ယူဆချက်နှင့် ရုတ်တရက် စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွနေတော့သည်။ ဆင်သားလဲ စားရတော့မည်ဟု မျှော်လင့်နေကြပုံရသည်။ တကယ်တော့ ရိုင်ဖယ်ကိုင်လာသည်မှာ ဆင်ကိုပစ်သတ်ရန်ထက် တစ်စုံတစ်ခုဆိုရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
တဲအိမ်တန်းအောက်ခြေက ကျောက်တုံးကျောက်ခဲ အပိုင်းအစတွေနဲ့ ဖို့ထားသော လမ်းလေးအတိုင်း စပါးခင်းဘက်ကို လျှောက်လာခဲ့ကြသည်။ မိုးတစ်ပြိုက်နှစ်ပြိုက် ရွာချထား၍ စိုစွတ်နေသော၊ မထွန်ယက်ရသေးသော၊ စပါးခင်းအလယ်မှာ မြက်စားနေသော ဆင်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ဆင်၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းကို ကျွန်တော်မြင်နေရသည်။ ဆင်က မြက်များကို နှာမောင်းနှင့် ရစ်ပတ်၍ ဒူးဆစ်နှင့် တစ်ချက်နှစ်ချက်ရိုက်ကာ ပါးစပ်တွင်းသို့ ဟန်ပါပါသွင်းလိုက်သည်။ လူအုပ်စုကြီး သူ့အနားကပ်လာသည်ကိုတော့ သတိပြုမိပုံမပေါ်။ ငြိမ်သက်စွာ မြက်စားနေသည်။ စိတ်ကြမ်းများလဲ ငြိမ်ကျသွားပုံရသည်။ ဆင်ထိန်းရောက်လာလျှင်တော့ အသာတကြည် အိမ်ခေါ်သွားနိုင်လောက်မည်။ ထို့ကြောင့် အခြေအနေကို အသာတကြည် စောင့်ကြည့်နေတော့မည်ဟု ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားသည်။ ရွာသားများတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေသော ဆင်၊ မုန်ယိုနေသော ဆင်ယဉ်တစ်ကောင်ကို ပစ်သတ်ခြင်းမှာ တန်ဖိုးရှိသော၊ ကြီးမားသည့် ယန္တရားတစ်ခုကို ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပေမည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ချက် ဝေ့ကြည့်လိုက်သည်။ လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ လူအုပ်စုက တဖြည်းဖြည်း များလာသည်။ လူဝါများ၏ မျက်လုံးအစုံပေါင်း နှစ်ထောင်ခန့်က ပျော်ရွှင်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပြည့်နှက်နေသော အရိပ်အယောင်များ ယှက်သန်းနေသည်။ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်တုန်းကမှ မနှစ်သက်ခဲ့သော သူတို့၏ မျက်လုံးများက ယခုတော့ အစွမ်းပြတော့မည့် မျက်လှည့်ဆရာတစ်ယောက်ကို ရွှန်းရွှန်းစားစားကြည့်ပုံမျိုးနှင့် ကြည့်နေကြသည်။ ဒီဆင်ကို ကျွန်တော် သတ်ရတော့မည်။ ကျွန်တော် လုံးဝမသတ်ချင်သော်လည်း လူအုပ်ကြီး၏ တွန်းအား၊ ဖိအားကို ကျွန်တော် မတွန်းလှန်နိုင်။ ကိုယ်လုပ်ချင်သည်အရာထက်၊ လူတွေ၏ ဆန္ဒနောက်သို့ ကျွန်တော်လိုက်ရတော့မည်။
ယခုအချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် သူတို့ကို အုပ်ချုပ်နေသူ၊ သေနတ်ကိုင် လူဖြူအာဏာရှင်တစ်ဦးမဟုတ်တော့။ ထိုလူအုပ်ကြီး၏ ကြိုးဆွဲရာနောက်ကို လိုရာယိမ်းကနေရသော ရုပ်သေးရုပ်တစ်ရုပ် ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေပြီ။ လက်နက်မဲ့ သော ပြည်သူတွေရှေ့မှ မားမားမတ်မတ်ရပ်နေသော သေနတ်ကိုင်ထားသူ အုပ်ချုပ်သူ လူဖြူတစ်ယောက်၏ အဆန်မရှိမှု၊ တန်ဖိုးမဲ့မှုကို ခံစားနေရသည်။ သူတပါးကို သေနတ်ကိုင်ပြီး အတင်းအကျပ် နိုင်လိုမင်းထက် အုပ်ချုပ်ခြင်းသည် မိမိပိုင်ဆိုင်ရမည့် လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလဲ မိမိကိုယ်တိုင် အသေသတ်နေခြင်းပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆာဟိဘ် ဟုသာ အခေါ်ခံနေရသော်လည်း တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်တော်တို့ လူဖြူဆာဟိဘ်များသည် နယ်ချဲ့စနစ်၏ အဆန်မရှိ ဟန်ပြအရုပ်များသာဖြစ်သည်။ မတန်မရာ မျက်နှာဖုံးကို စွပ်လျှက်၊ မျက်နှာဖုံးအလိုက် မျက်နှာကို လိုက်ပြောင်းလဲစေလာရသော၊ နယ်ခံလူတွေအကြိုက်ကိုလဲ အလျှင်းသင့်သလို လိုက်နေရသော သူများ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာရသည်။
လူအုပ်ကြီးက ဆင်ကိုပစ်သတ်စေချင်နေပေမယ့် ကျွန်တော် မသတ်ဝံ့။ ဆင်ကလဲ အဘွားအိုတစ်ယောက်၏ ညင်သာပုံမျိုးနှင့် မြက်ခြောက်များကို စားနေသည်။ ကလေးဘ၀ထဲက အသဲငယ်တတ်သူ တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့သော်လည်း တကယ်တမ်း သတ်ဖြတ်ရမည်ဆိုတော့လဲ လူတို့၏ သဘာဝအတိုင်း အကောင်ကြီးလျှင် မသတ်ဝံ့။ ဒီဆင်၏ တန်ဖိုးမှာ ယခုချိန်ပေါက်ဈေးနှင့်ဆိုလျှင် အနည်းဆုံး ပေါင် ၁၀၀ တန်မည်။ ဆင်သေကတော့ တန်ဖိုးရှိမည်မဟုတ်။ အစွယ်တွက်သာ ၅ပေါင်လောက်သာ တန်တော့မည်။
ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဝေ့၀ိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ ဆင်အကြောင်း သိနိုင်သော လူအချို့ကို အခြေအနေ မေးစမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ဆင်က သူ့အနားကပ်လျှင် ရန်လိုနိုင်သည်၊ ဆင်နားမကပ်ဘဲ ဒီအတိုင်းထားလိုက်လျှင် သူ့ဘာသာနေနေလိမ့်မည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဆင်ကို ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပြီး ဆင်ထိန်းလာမှ အခြေအနေကြည့်ထိမ်းခိုင်းလိုသော ဆန္ဒရှိသော်လည်း၊ သေနတ်တစ်လက်လုံး ကိုင်လာပြီးမှ နောက်ပြန်လှည့်လျှင် နယ်ခံများ၏ တံတွေးခွက်တွင် ပက်လက်မျောဖွယ်ရာ ဖြစ်တော့မည်။ ဆာဟိဘ်တို့သည် တိကျပြတ်သားရမည်၊ ကိုယ် ဘာလုပ်မည်ကို ကိုယ်သိရမည်၊ မိမိကိုယ်ကို နားလည်ရမည်၊ သတ္တိရှိရမည်၊ ကျွန်တော့ကြောင့် တခြား လူဖြူဆာဟိဘ်များ သိက္ခာကျ ခံမည်လား။ ဆင်နားကပ်ပြီး ထိုးစစ်ဆင်လိုသည့် စိတ်ရှိ၊ မရှိကိုလဲ စမ်းသပ်၍ မဖြစ်။ အခန့်မသင့်၍ ထိုးစစ်ဆင်လာလျှင် မိုးဦးကျစမို့ ပျော့နေသော နွံထဲတွင် ခြေသလုံးမြုပ်ပြီး ထွက်မပြေးနိုင်ပါက ကူလီကဲ့သို့ ဒါမှမဟုတ် လမ်းကြိတ်စက်အောက်က ဖားအဖြစ်ကဲ့သို့ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ နယ်ခံများကလဲ သနားကြင်နာသည်ထက် လှောင်ပြောင်ရယ်မောကြလိမ့်မည်။ တစ်သက်လုံးလဲ ပြောစမှတ်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။
ကျည်ကပ်ကို ထည့်လိုက်ပြီး ၀မ်းလျားမှောက်လျှက် သေနတ်ကို ချိန်လိုက်သည်။ နယ်ခံများထံမှ ကျေနပ်သွားသော သက်ပြင်းချသံအချို့ကြားလိုက်ရသည်။ ကပွဲစတော့မည်မို့ ကန့်လန့်ကာအလှစ်မှာ ကျေနပ်သွားသော ပွဲကြည့် ပရိတ်သတ်ကဲ့သို့ပင်။ ဂျာမဏီပြည်ဖြစ် ရိုင်ဖယ်သေနတ်၏ လှပသေသပ်မှုကို သတိထားလိုက်မိသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ ဆင်၏ ဦးနှောက်နေရာကို ကျွန်တော်ချိန်ထားလိုက်သည်။
( ဒီလိုနဲ့ စာရေးဆရာက ဆင်ကို ဘယ်လို ပစ်သတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်ရေးပါတော့တယ်။ ဆင်လေးခံစားနေရတာတွေ၊ ရွာသားတွေက ဆင်လေးဒဏ်ရာရနေတာတောင် (အသက်ရှင်နေသေးတာတောင်) ဓားတွေ၊ ပုဆိန်တွေနဲ့ ၀ိုင်းနေကြတွေကိုလဲ အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီနောက်ဆုံး လေးပိုဒ်ကို ယခုထိ အသေးစိတ် မဖတ်နိုင်သေးသောကြောင့် ဒီနေရာမှ စပြီး ဆုံးသွားတဲ့ အထိ ဘာသာမပြန်နိုင်တော့တဲ့ ကျွန်မကို နားလည်ပေးကြပါရှင်။)
George Orwell ၏ Shooting an Elephant ကို မြန်မာလို ဖတ်ချင်သူများအတွက် (အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်မှ သူငယ်ချင်းများ အတွက်) စေတနာသက်သက်ဖြင့် ဘာသာပြန်ပေးသည့် အခါတွင် အမှားအယွင်း၊ လိုအပ်ချက်၊ မူရင်းအာဘော်မှ ကွဲလွဲမှုများရှိပါက ကျွန်မ၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါကြောင်း။
မှုရင်း အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်လိုသူများ ဒီနေရာ သို့သွားပါရန်။
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:15 PM3comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ၀တ္ထု, ဘာသာပြန်
ပန်းချစ်သူများအတွက်…. ဒီတစ်ခါတော့ အိမ်ရှေ့ က ပန်းလေးတွေပါ။
တစ်ခြံလုံး ခရမ်းပြာရောင်တွေ လွှမ်းတဲ့နေ့
ပန်းလေးတွေလို ကြွေရင်တောင် ဝေခဲ့ဖူးတာတွေလဲ အမှတ်ယနိုင်ကြပါစေ။
နောက်ပန်းတွေ ပွင့်ဖို့ ချွေပေးကြတဲ့ အခါလဲ ကျေနပ်နှစ်သိမ့် နေနိုင်ကြပါစေရှင်။
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 9:53 PM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:10 PM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:49 AM 10 comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
အလွမ်းတွေနဲ့ အတိပါပဲ.. မောင်။
ခဏကြာတော့လဲ.. မောင်.. ကျွန်မကို မေ့လို့
ထားသွားမှတော့ နောက်လှည့်မကြည့်နဲ့တော့ မောင်ရယ်..
ရင်ထဲက ပဲ့တင်ခတ် စကားလဲ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:47 AM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကျွန်မကို သူငယ်ချင်း၊ ဘလောဂ်ရေးဖော်ရေးဘက်များက တက်ဂ်ထားတာ အကြောင်းအရာ လေးခုတောင်ရှိနေပြီဆိုတာ သိပေမယ့် မရေးဖြစ်ခဲ့တာကို တောင်းပန်ပါတယ်။ အခု အဲဒီအကြောင်းအရာ လေးခုလုံးကို (မိုး၊ အာဇာနည်နေ့၊ အာဘွားနဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးရခြင်းအကြောင်း) စုပြီးသာ ရေးခွင့်ပေးပါတော့လို့ တောင်းပန်လိုပါတယ်။ (အခုရေးနေချိန်မှာ လွန်စွာအိပ်ငိုက်နေကြောင်း သတိပေးအပ်ပါသည်)
အခုအပြင်မှာ မိုးရွာနေတယ်။ ဟိုတလောက သိပ်ပူလို့ ဒီနေ့တော့ မိုးရေတွေအများကြီးနဲ့ ရွာသွန်းဖြိုးနေတယ်။ အာဇာနည်နေ့ကလဲ ဒီလိုပဲ မိုးတွေရွာနေတဲ့ ကာလပဲဖြစ်မယ်။ လူတွေက ပြောလေ့ရှိကြတယ်။ သေသောသူကြာရင်မေ့တဲ့၊ ဒါက အားလုံးနဲ့တော့ သက်ဆိုင်မယ် မထင်ဘူး။ လွယ်လွယ်နဲ့ မေ့တတ်ကြသူတွေရှိသလို၊ စွဲလန်းတတ်သူတွေလဲ ရှိတယ်မို့လား။ လွယ်လွယ်နဲ့ မေ့တတ်သူတွေကို မမေ့နဲ့ စွဲလန်းနေလို့ အတင်းတားမြစ်ဖို့အကြောင်းမရှိသလို၊ စွဲလန်းတတ်သူတွေကိုလဲ မိမိစံနှုန်းနဲ့ ယှဉ်ထိုးလို့ မေ့ပစ်လိုက်လို့ တားမြစ်ရန်အကြောင်းမရှိဟု ထင်ပါတယ်။ အခု အာဇာနည်ကြီးများကို ကျွန်မတို့ မမေ့နိုင်၊ မမေ့သင့်သလိုပေါ့လေ။ လူတွေက အသက်ရှင်နေချိန်မှာသာ တန်ဖိုးရှိတာ သေဆုံးသွားရင်တော့ ဘာတန်ဘိုးမှ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကျွန်မလက်ခံနိုင်ဘို့က နဲနဲခက်နေတယ်။ ဘာမှအသုံးမကျတော့ဘူးလို့ ယူဆလို့ရသလို၊ အသုံးကျခဲ့တယ်။ ဖန်တီးခဲ့တယ်၊ ပေးကမ်းခဲ့တယ်လို့ တွေးလဲရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ခုလိုနေနေရတာ ကျောက်ခေတ်ထဲက ဘိုးဘွားတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ဘ၀သင်ခန်းစာတွေ၊ တီထွင်ဖန်တီးခဲ့မှုတွေကို လက်ဆင့်ကမ်း၊ ဆင့်ပွား မြှင့်ယူခဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အာဇာနည်ကြီးများရဲ့ ဘ၀တွေပေါ်မှာရင်းပြီး ခုလက်ရှိကျွန်မတို့ ဘ၀တွေ ဖြစ်တည်နေတာလို့ထင်ပါတယ်။ ဟိုင်းပရိုဖိုင်းလ် အာဇာနည်များသာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေ တစ်ဦးချင်းစီဟာ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း တစ်စုံတစ်ယောက်ယောက်ကို သိလျှက်ဖြစ်စေ၊ မသိပဲဖြစ်စေ (အာဇာနည်ကြီးများလောက် ကြီးမားသော ပေးကမ်းမှု မဟုတ်သည့်တိုင်အောင်) အမြဲဝေမျှ ပေးကမ်းနေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကတော့ အာဇာနည်နေ့ဆိုရင် မိသားစု အာဇာနည်ကုန်းပေါ် အမြဲရောက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက လူတွေအများကြီး စနစ်တကျတန်းစီ၊ အမိန့်ပေးသံစောင့်၊ အလေးပြုလေ့ရှိတယ်။ အခုတော့ ဘယ်လိုလဲမသိဘူး။ ကျွန်မတို့ အလေးပြုပြီးရင် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ် တက်လေ့ရှိတယ်။ ပြီးရင် ဖေဖေနဲ့ မေမေ့ မိတ်ဆွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တစ်နေကုန်နီးပါး နေလေ့ရှိတယ်။ နေ့လည်စောင်းပိုင်းဆို ဘုန်းကြီးကျောင်းနောက်က တံစက်မြိတ်အောက်မှာ မိုးပြင်းလို့ တ၀ုန်းဝုန်းကျနေတဲ့ ရေတွေခံထားတဲ့ စည်ပိုင်းပြတ်ထဲက ရေတွေကို အားပါးတရခပ်ချိုးခဲ့တဲ့ နေ့တွေကိုလဲသတိရနေမိသေးတယ်။
ကျွန်မက မိုးကိုသိပ်ကြိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့် အပူပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်နဲ့ စင်္ကာပူမှာ ရွာတဲ့မိုးကိုပေါ့၊ နွေးနွေးလေးနဲ့ ကဗျာဆန်ဆန်ရွာတဲ့မိုး။ အဲသလိုမိုးတွေထဲမှာ ထီးမပါပဲ (တစ်ယောက်ထဲ) လမ်းလျှောက်ရတာ အလွန်လှပဆန်းကြယ်တဲ့ အရာတစ်ခုလို့မြင်တယ်။ ကနေဒါမိုးကတော့ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီထိ စိမ့်တတ်ပြီး သုံးလေးငါးရက် မရပ်ပဲ ရက်ဆက်ရွာတတ်လို့ မိုးစွေကို ကဗျာဆန်တယ်လို့ မထင်တတ်။
မိုးရွာထဲမှာ ခရေကောက်ဖူးတဲ့ ရက်တွေ၊ ကျွန်မငြင်းပယ်လိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ မိုးရွာထဲမှာ ထီးတစ်လက်အောက်မှာ တွေ့လိုက်ရတဲ့ရက်တွေရယ်ကို ခုထိ မမေ့နိုင်သေး။ အဲဒီနေ့က ထီးမပါပဲ ဆရာခိုင့်ဆီက ပြန်လာတဲ့ ကျွန်မ၊ ပေပေတေတေ ထမီရှည်ရှည်ဝတ်လို့ ထမီအနားစတွေရော၊ ဆံပင်ရှည်တွေကော၊ ကျွန်မလက်ထဲက ဂစ်တာရော ရွဲခဲ့တဲ့နေ့။ ကိုယ်ငြင်းလိုက်ပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်း နောက်တစ်ယောက်နဲ့ အတူတွဲတွေ့တော့လဲ ရင်ထဲမှာ ကျင်တက်သွားပြီး နေရင်းထိုင်ရင်း ကဗျာတွေက ထွက်ကျလာခဲ့သေးတယ်။
မိုးရွာပြီဆိုရင် အထူးသဖြင့် ညခင်းတွေ လူခြေတိတ်လို့ သစ်ရွက်တွေ အရောင်တောက်လက်လာတဲ့ထိ မိုးတွေရွာလာရင် ကဗျာရေးချင်တဲ့၊ စာရေးချင်တဲ့ ခံစားချက်တွေက အုံကြွလာတတ်တယ်။ မွေးကတည်းက ပါလာတဲ့ အရာထင်တယ်လေ။ အဒေါ်က သူ့သူငယ်ချင်း အန်တီကြည်အေးတို့နဲ့ တခေတ်ထဲ သတင်းစာမှာ ဆောင်းပါး အချို့ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ အမ၀မ်းကွဲတစ်ယောက်က ကလောင်ခွဲ သုံးခုလောက်နဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ စာလေးတွေရေးတယ်။ သူတို့တွေနဲ့ ဦးသုမောင် စာအကြောင်းပေအကြောင်းပြောနေရင် ကျွန်မ သူများတွေလို အိုးပုတ်နဲ့ မကစားပဲ အနားမှာ ယောင်လည်လည်လုပ်တတ်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ စာမရေးရရင် မနေနိုင်တာ။ ဘယ်သူဖတ်ဖတ်၊ မဖတ်ဖတ်၊ ရေးနေရရင် ကျေနပ်နေတဲ့ ဒီပိုးက ရှစ်တန်းလောက်မှာ နဲနဲသေသွားတယ်။ အဲသည်နေ့က ၀တ္ထုလေး တစ်ပုဒ်ရေးပြီး စာကျက်စားပွဲပေါ်တင်ထားတာ ဖေဖေက မြင်သွားတယ်။ အောက်မှာရေဆင်းသောက်ပြီး အခန်းထဲဝင်လာတဲ့ ကျွန်မ စာကျက်စားပွဲနားမှာ ရပ်နေတဲ့ ဖေဖေ့ကိုတွေ့တော့ နဲနဲရင်တုန်သွားတယ်။ ရေးလက်စ ၀တ္ထုကို ရည်းစားစာ ရေးထားတယ်ထင်ပြီး ဆူတော့ ကျွန်မ မနဲရှင်းပြရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဖေဖေနဲ့ မေမေက ဆရာနွမ်ဂျာသိုင်းနဲ့ တွေ့ပေးတယ်။ သူ့ကို အဲဒီနေ့က လက်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပေးလိုက်တယ်။ မဂ္ဂဇင်းမှာ နောက်တစ်လ ပါလာမလားလို့ စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပေမယ့် မပါလာခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ တစ်ချက်လေးနဲ့တင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကလေးပီပီ ယုံကြည်မှုတွေ ဆုံးပါးခဲ့လို့ စာရေးခြင်းကို တစ်ယောက်ထဲ တိုးတိတ်စွာသိုဝှက်ခဲ့တယ်။
ဒီကိုရောက်တော့ ဒီမြို့က လစဉ်လူမျိုးစု ဂျာနယ်လေးတွေမှာ ဟိုတစ်စု၊ သည်တစ်ခု ရေးလာခဲ့တယ်။ နောက်တော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အိပ်မက်ဒေါ့ကွန်းမှာ ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်က လူတွေနဲ့ အမြင်ချင်း ဖလှယ်နိုင်တယ်။ အဓိကကတော့ ဆယ်ကျော်သက်ကတည်းက မြန်မာပြည်နဲ့ ဝေးခဲ့တဲ့ ကျွန်မ၊ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြန်လည်နီးစပ်မှုတစ်ခုကို ခံစားခဲ့ရတယ်။ နောက်တော့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်လေးတစ်ခု မလုပ်တတ်လုပ်တတ်နဲ့ လုပ်လိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ကူညီမှု၊ ကိုယ်တိုင်လေ့လာမှုတွေ ပေါင်းစုပြီး ရင်ဖွင့်ဖို့ သက်သက်ရည်ရွယ်ပြီး ဘလော့ဂ်စရေးခဲ့တယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ရင်ဖွင့်ဖို့ ရည်ရွယ်လို့ လူသိပ်မသိစေချင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မစာကိုဖတ်ပြီး ကျွန်မကလောင်နဲ့ အကြောင်းအရာက လွဲလို့ ကျွန်မဘယ်မြို့ကဆိုတာတောင် မသိစေချင်ခဲ့တာ၊ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို မျက်စိလည် လမ်းမှားရောက်လာသူများကို ရင်ဖွင့်ရုံ၊ ဝေမျှရုံကလွဲပြီး ကျန်သော ရည်ရွယ်ချက် မရှိခဲ့။
အွန်လိုင်းဘယ်တော့မှ မတက်တဲ့ ကျွန်မ၊ အွန်လိုင်းလောကကို real world လို့ မယူဆခဲ့တဲ့ကျွန်မ၊ အွန်လိုင်းပေါ်က လူတွေကို real people လို့ မယူဆခဲ့တဲ့ ကျွန်မ၊ မွေးရာပါ လျို့ဝှက်သိပ်သည်းတတ်မှုတွေနဲ့ (private person) ကျွန်မ၊ ဘလော့ဂ်သူငယ်ချင်းတွေရလာတယ်။ သူတို့ကို ခင်လာတယ်။ ဘလောဂ်ရေးရတာ ပျော်လာတယ်။ သူတို့ ဆိုဒ်တွေကို မသွားရရင်မနေနိုင်ဖြစ်လာတယ်။ ဆီဗုံးကစာလေးတွေကို၊ စာဖတ်သူတွေရဲ့ မှတ်ချက်လေးတွေကို တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးလာတယ်။ သူတို့ရဲ့ အားပေးသံတွေကို ငတ်မွတ်လာတယ်။ သူတို့ကိုလဲသံယောဇဉ်ဖြစ်လာတယ်။ ဖြစ်တာမှ အရမ်းဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် သံယောဇဉ်ရှိသော်ငြားလည်း (စွဲလန်းမှု အစပျိုးနေသော်ငြားလည်း) ကိုဖြိုးခိုင်းသလို အာဘွားတော့ မပေးရဲသေးပါ။ ပေးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဘလောဂါတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်နေရာကို အာဘွားပေးလေ့ရှိလဲ (နဖူး၊ ပါး၊ နားရွက်၊ မျက်ခုံးမွှေး ဒါမှမဟုတ် ဒီနိုင်ငံဒီဇိုင်း ပါးချင်းကပ်ပြီး လေကိုပဲ အာဘွားပေးလား) ပြောပြပေးကြရင် အဖြေပေါ်မှာ မူတည်လို့ အာဘွားကို ပေးတတ်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်လို့…။
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:50 AM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : tag game, ခံစားချက်
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 10:04 PM4comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 2:32 AM4comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:37 AM6comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကျွန်မရဲ့ စာတိုပေစလေးတွေကို ကျွန်မရဲ့ဘလော့ဂ်မှာ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြန်လည်စုစည်းနေခြင်းပါ။ စာဖတ်သူများရဲ့ ကော့မင့်လေးတွေကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ဧပြီလ ၂၀ရက်၊ ၂၀၀၆ က အိပ်မက်မှာ တင်ခဲ့တဲ့ စာစုလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
သည်ရုပ်ရှင်ကို မကြည့်သင့်မှန်းသိလျှက်နှင့် သွားကြည့်မိသည်မှာ ကျွန်မကိုကိုယ် ကျွန်မအသဲမာတတ်ပြီလို့လျော့တွက်ခဲ့မိလို့ ပါ။ လူတွေရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်။ ကျွန်မကတော့ ရုပ်ရှင်လဲသိပ်မကြည့်ဖြစ်ပါ။ ရုပ်ရှင်ဆိုတာပျော်ချင်
လို့ ကြည့်တာ မို့ ကြည်ြ့ပီးရင် စိတ်ထဲစွဲကျန်ရစ် မျက်ရည်ဝဲရမဲ့အဖြစ် ပိုက်ဆံပေးပြီး ကိုယ့်အပူကိုယ်မရှာချင်ပါ...။ ဒါကြောင့် ကြည့် ရင်လဲ ရုံထဲကထွက်လာပြီးရင် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားပါစေမယ့် ရှေ့ပိုင်းမှာ ဘာမှန်းမသိလိုက်ပဲ နောက်ဆုံးမှ ဂြိုလ်သား ကြီးတွေ ရုတ်တရက် ထွက်လာတတ်သည့် ဂြိုလ်သားကားတွေပဲ ကြည့်လေ့ရှိသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတော့ ကြည့်သင့်သည်ဟု ယူဆပြီး ဗဟုသုတအနေနှင့်ရွှေနွယ်ရိုးဆိုသည့် လွမ်းရုပ်ရှင်လေး၊ Forest Gump, Cast Away နှင့် Titanic တို့ ကြည့်မိပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်နောင်တရလို့ မဆံုးတော့။
ဘ၀မှာ ချစ်သူနှင့် တစ်ခါမှ ရုပ်ရှင်မကြည့်ဖူးသူသည်လဲကျွန်မသာဖြစ်လိမ့်မည်။
ချစ်သူနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပင်လယ်တွေခြားလို့နေခဲ့ရပေမယ့် ချစ်သူနှင့်မှ ရုပ်ရှင်ကြည့်မည်ဟု ရူးသွပ်စွာနှင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အတိုင်း
သူနှင့် ဝေးနေခဲ့စဉ် ကာလများမှာ တခါမှ ရုပ်ရှင်မကြည့်ခဲ့။
ချစ်သူကို ထားခဲ့သောနေ့ က မိုးများ ရွာနေခဲ့ပါသည်။ ဖိနပ်စီးမထားသော ကျွန်မတို့ခြေထောက်တွေအောက်မှ အေးမြသော ကျောက်သားပြင်ဖြူဖြူထက်တွင် မိုးရေများ စီးဆင်းနေခဲ့သည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် မတ်တပ်ရပ်လို့ စကားမဆိုဖြစ်ခဲ့ကြသော ကျွန်မတို့ ကိုယ်ပေါ်သို့ မိုးရေစက်နှင့် အတူ ညောင်ရွက်ဝါအချို့လွင့်ကျလာသည်။
ငါးနှစ်စောင့်မယ်ဟု ချစ်သူရက်ရောစွာပြောပြီး စနေထောင့်တွင် ရေလှုနေခဲ့ စဉ်က
ခပ်ဝေးဝေးမှရပ်ကြည့်နေခဲ့ ရင်း တိတ်တဆိတ် ကြေကွဲနေခဲ့ သည်။
မရေရာသောလမ်းမှာ လျောက်လှမ်းခဲ့ ရင်း ကုန်ဆုံးသက်တမ်းရက် အကန့်အသတ်မရှိသော၊ လက်ဆောင်ရဖူးသော၊ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်လေး နှစ်စောင်အား ချစ်သူနှင့်မျှ ကြည့်မည်ဟုရည်စူးလို့ ယွန်းဗူးလေးထဲ ထည့်ထားခဲ့ ဖူးသည်။
ခုနှစ်နှစ် ခုနစ်မိုးဆိုသည်မှာ ဟိုးလူကြီးတွေခေတ်မှာပဲရှိခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။
ကျွန်မတို့တကယ်ကို ခုနှစ်နှစ် ခုနှစ်မိုး ချစ်ခဲ့ကြပါသည်..။
ချစ်သူကို ၀န်ခံခဲ့တဲ့ အတိုင်း မိုင်ပေါင်းထောင်သောင်းချီလို့ နှစ်များစွာ ဝေးနေခဲ့ ကြစဉ်အချိန်တွေမှာ၊ တစ်ခါတစ်ရံတော့ ကျွန်မကို စိတ်ဝင်စားသူတချို့နှင့်ကော်ဖီဆိုင်၊ အအေးဆိုင် ထိုင်ဖူးခဲ့ ပါသည်။ သူတို့ နှင့်တွဲပြီး အအေးဆိုင်ထိုင်ခဲ့ စဉ်က လူမြင်ခံရမှာ ရှက်သလိုလို၊ သူတို့ စားတဲ့သောက်တဲ့ ပုံကပဲ တစ်ခုခုမှားနေသလိုလို၊
ကိုယ့်ကိုအကောင်းနှင့် ချီးမြှင့်ပြောတဲ့ သူတို့စကားတွေကပဲ အရှက်ရစေသလိုလိုိ
နှင်းဆီပွင့်ကို ကားရေသုတ်တံမှာ လာညှပ်သွားတဲ့ သူတို့ ရဲ့ လုပ်ရပ်ကပဲ ဒေါသထွက်စရာလိုလို၊ ကုန်ကုန်ပြောရလျှင် သူတို့၏ စကားလုံးများ၊ လုပ်ရပ်များအားလုံးသည်
ကျွန်မအတွက် စိတ်တိုင်းမကျစရာများသာဖြစ်နေခဲ့ ပါသည်။
ဒါတွေအားလုံးသည် သူတို့၏ လိုအပ်မှုများထက် ကျွန်မ၏ စိတ်ခံစားချက်များသာလျှင် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ချစ်သူနှင့်ကံ့ကော်တန်းမှာ တွဲလျှောက်ခဲ့ စဉ်ကလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် အလှဆုံး မိန်းမတယောက်လိုခံစားခဲ့ ရသောခံစားချက်မျိုး၊ အရာရာဟာလဲမယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲ သိမ်မွေ့လှပလွန်းနေခဲ့သည့် ခံစားချက်မျိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးသည်လဲ အေးမြငြိမ်သက်နေသည့် ခံစားချက်မျိုး၊ အလွန်ဖြူစင်သော အချစ်မျိုး၊ ဘယ်သောအခါမှ ရရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ဆိုတာကို တပ်အပ်သိခဲ့ပါသည်….။
ငယ်ရွယ်နုပျိုသည့်အရွယ်တွင် ချစ်သူကို လွမ်းဆွတ်ခြင်း၊ သူများချစ်သူ စုံတွဲလေးတွေ shopping mall တွေထဲမှာ လက်ချင်းတွဲလို့ သွားလာနေကြတာကိုငေးမောရင်း၊ ချစ်သူထံမှ စာလွှာလေးတွေကို စောင့် မျှော်ရင်းနှင့်၊ ကျွန်မ၏အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးခဲ့ ပါသည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့် ခရီးတိုလေးတွေမှ အပြန်တိုင်းလဲ ကျွန်မရဲ့
ကမ္ဘာငယ်လေးဖြစ်သည့်အခန်းလေးထဲမှာ ချစ်သူကို လွမ်းဆွတ်ရင်း နှစ်တွေ ကြာခဲ့ ပါသည်။
ချစ်သူကို ကျွန်မ ဘယ်သောအခါကမှ ကြိုးရှည်ရှည်နှင့်လှန်မထားခဲ့ ပါ။
နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်နေခဲ့ ရန်လဲ တစ်ခါမှ မတောင်းဆိုခဲ့ပါ။
ကျွန်မထက် ချစ်ရမည့်သူ တွေ့ ရင်လဲ သဘောထားကြီးစွာ ကျွန်မ နောက်ဆုတ်ပေးမည်ကို
ချစ်သူကို အသိပေးထားပြီးလဲ ဖြစ်ပါသည်..။
သို့ သော်ချစ်သူနှင့်ပေါင်းဆုံ ရန်ရည်စူးပြီး ပညာရေးအပါအ၀င် ဘ၀၏ကြီးမားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချစ်သူအတွက်အမြဲ ထည့် တွက် စဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါသည်။
သုံးနှစ် အကြာတွင် ချစ်သူနှင့်ပထမအကြိမ် ရန်ကုန် Main Campus Library
ရှေ့မှာ ပြန်ဆုံခဲ့စဉ်ကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြဖူးစဉ်က ကျွန်မတို့၏ သူငယ်ချင်းများက ရယ်မောခဲ့ကြပါသည်။
ကျွန်မကို အံ့သြစွာကြည့်ရင်း ကျောင်းကြီးတခုလုံးမှာအလှဆုံးဟုချစ်သူပြောခဲ့ သည်ကို သူပြောတာမဖြစ်နိုင်မှန်းသိခဲ့ပေမယ့် ချစ်သူနှင့်ဆိုလျှင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ
ကျက်သရေအရှိဆုံး မိန်းမတယောက်လို ခံစားနေခဲ့ ဆဲဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီတုန်းကတော့ဘ၀ရှေ့ရေးအနည်းငယ်ပြောဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ချစ်ရသူနှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘ၀၏ အောင်မြင်ခြင်းတစ်ခုဟု ချစ်သူပြောခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ် Singapore Jurong West က သစ်ပင်တန်းအောက်မှာဆုံ ခဲ့စဉ်ကတော့ 
ချစ်သူနှင့်သူ၏ Singaporean စကပ်တိုတို မိန်းကလေးကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ ပါသည်။
ချစ်သူ၏ကြေကွဲနေသောမျက်ဝန်းများ၏ စကားသံများကို ကျွန်မတို့ ၏ ခုနှစ်နှစ် ဇတ်လမ်းကိုသိသည့်ချစ်သူ၏မိန်းကလေးက နားလည်ပေးသည့် အနေနှင့်ခပ်လှမ်းလှမ်းက အုန်းပင်ပျိုအောက်မှာ ရှောင်ပေးနေခဲ့ပါသည်..။
ချစ်သူတို့ ဇနီးမောင်နှံအတွက် လက်ဖွဲ့ထဲတွင် ခုနှစ်နှစ်နီးပါးသက်တမ်းရှိသည့် 
ဒီရုပ်ရှင်ကို မကြည့်သင့်မှန်းသိရဲ့နှင့် သွားကြည့်မိသည်မှာ ကျွန်မကိုကိုယ် ကျွန်မအသဲမာတတ်ပြီလို့ လျော့တွက်ခဲ့မိလို့ ပါ။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မင်းသမီးက မျက်ရည်ဝဲ သော မျက်ဝန်းများနှင့်သူချစ်တဲ့ သူကို ကြည့်ပြီး သူ့ဘ၀ရဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းဟာ သူ့ချစ်သူနဲ့နီးရဖို့ပါဟုပြောခွင့်ကြုံခဲ့ ပါသည်။
ကျွန်မရဲ့ အထီးကျန် ခြေလှမ်းဟောင်းလေးတွေ အကြာင်း ဘယ်သောအခါမှ ပြောခွင့်ကြုံလိမ့်မည် မဟုတ်တော့ပါ။
ရုပ်ရှင်ရုံ မီးများ လင်းလာချိန်တွင်တော့ ပါးပြင်မှ မျက်ရည်များကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း သုတ်လိုက်ရင်း အချစ်ကားတွေ ဘယ်တော့မှ မကြည့် တော့ ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့ သည်။
ချစ်သူပြောခဲ့သလို ချစ်ရသူနှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘ၀၏ အောင်မြင်ခြင်းတစ်ခု အမှန်တကယ် ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ကျွန်မတို့သည် ဘ၀၏ရည်မှန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရင်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြသူများသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
တပြေသူရဲ့ ခံစားချက်တွေက သိပ်ထိတာပဲ။
(မွန် on 2006-04-22 08:29)
(TT (Link) on 2006-04-24 07:08)
(kingpeacock (Link) on 2006-05-09 05:40)
(nn on 2006-05-17 07:30)
လောကကြီးက ပျော်စရာကြီးလို့ထင်တာပါဘဲ။ ကျနော်သာ တစ်ပြည်သူ့နေရာမှာ ဆိုရင် ဆွဲဆောင့်လုပ်ပစ်မှာဘဲ...ဟဲ့အကောင် ငါ့မှာတော့ ကြိုးစားလိုက်ရ၊ စောင့်လိုက်ရတာ..နင်ကတော့လုပ်ရက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေ။အဲဒီလို နားလည်မှုမျိုးပါ။။။
(phoehtet on 2006-05-28 12:02)
ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေ....တကယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့သူ တွေအတွက်တော့ ဒါကြီးက တော်တော်ခံစားရတယ်ဗျ..
ကျွန်တော့်အဖြစ်ကတော့ တပြည်သူနဲ့နည်းနည်း ကွဲနေတယ်.. ဒါပေမဲ့ပူပူနွေးနွေးခုရက်ပိုင်းလေးပဲ ဖြစ်သွားတာ..
ချစ်ရသူနဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘ၀ရဲ့ အောင်မြင်ခြင်းတခု ဆိုတာကို တော့ တော်တော်သဘောကျတယ်.
ဒါပေမဲ့လည်း ချစ်တိုင်းလည်းမညား၊ ညားတိုင်းလည်း မချစ်ဆိုတာကြီးက ရှိသေးတော့..
အင်း..တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေတကယ်ညား ကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
(သားဇေ on 2006-06-02 08:14)
စာဖတ်သူ ကိုပါ ကိုယ်တိုင် ခံစား လာစေ တဲ့ အရေး အသား ကို ကြိုက် ပါတယ်...
(ဒီဝိုင်း on 2006-06-22 08:26)
I feel that I read about myself.
(Laura on 2006-07-14 00:38)
I've been there... and it's painful...but finally I'm together with my chit-tu after eight yrs...
(hnem on 2006-07-16 19:16)
Thu ka thate yat sat tar pei naw? I guess that is life! You've got talent!
(YYK on 2006-08-28 03:08)
I agree! The writer is suchagreat talent!
(LWN on 2006-09-14 23:38)
..feeling so sorry..
(Thyda on 2006-09-15 06:06)
I admit that i had some kind of unexpressive feeling after reading. Sometimes, we are being cheatted by love without known. But it's really true that time will heal the pain finally.
I like the plot of the writer very much. Ok, go on. I wish the writer to success sooner.
(Thandar on 2006-11-22 03:56)
ရေးထားတာ အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် ။ ရိုးရိုးလေး ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ။ ”ချစ်သူ့ အိမ်” ဆိုတာကိုလဲကြိုက်ပါတယ် ။
တခုလောက် တကယ်သိချုင်လို့ပါ -- ၇နှစ်ကြာတဲ့ရုပ်ရှင် လက်မှတ်က ကြည့်လို့ရသေးလားဟင် ။ ဘာရုပ်ရှင်ဘာလိမ့် ။
(gyit_tu on 2006-11-23 07:37)
I wanna know whether it is real story or not. If it is notareal story of yours or your friend,I want to let you know that there is such story on the earth... Btw, I like your writing... it is very very good....
(deadwalker on 2006-12-31 12:03)
Be sure that you must have success in life.
(MZN on 2007-01-03 04:37)
The writing style is really smooth. I am sorry if this isatrue story. The music at the end of the post could add to the feeling of the reader. I am not sure who added this song, but can anyone tell me the title and the singer of the song? I am in love with this song!!! (I'd appreciate it very much if any could post the reply back here asacomment.)
(Thant on 2007-01-14 21:03)
Thanksalot! It helped me find the song and the whole album at
the Myanmar MP3 website. Thanks again!
( Thant on 2007-01-14 22:41)
(ShweKywet on 2007-04-05 16:05)
(aye myat on 2007-04-22 04:37)
ko bala so tar,minn thar gyi thu mg ko pyaw dar lar?
(aye myat on 2007-04-22 04:52)
Feeling so bad. But like it.
Thanks for ur short story. i like it so much.
(ghostbell on 2007-06-22 00:04)
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:38 AM9comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ၀တ္ထု, ခံစားချက်
မီးရောင်ခပ်မှိန်မှိန် အခန်းထဲမှာ လူသုံးယောက်ထိုင်နေသည်။
တစ်ယောက်က ၂၀ကျော်၊ နောက်တစ်ယောက်က ၃၀ကျော်၊
ရှေ့က မီနီရုပ်ရှင် သီရေတာမှန်ပြင်ပေါ်တွင် ကာရာအိုကေ သီချင်းတစ်ပုဒ်။ မည်သူမျှ မဆိုဖြစ်ကြ။ သုံးယောက်လုံးက သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ် နားထောင်နေကြသည်။
ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ အဲဒီသီချင်းက နံရံတွေကို တိုးတိုက်သွားသည်။
လတ်ဆတ်တဲ့ ခရမ်းနုရောင် ပန်းပွင့်တွေ ခပ်တိုးတိုး နှုတ်ဆက်သွားသည်။
စားပွဲပေါ်က အအေးပုလင်းတွေကို ခေါင်းငုံ့ကြည့်သွားသည်။
ပြီးတော့ ပြူတင်းပေါက်မှ တဆင့် ပြာလဲ့လဲ့ဖရေဇာ မြစ်ပြင်ဘက်သို့ ပျံသန်းသွားသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်လောက်ထဲက ဒီသီချင်းကို အင်တာနက်တွေပေါ်မှာ ရှာခဲ့ဘူးသည်။
ဘယ်မှာမှ ရှာလို့မရခဲ့။ အခုတော့လဲ ဒီသီချင်းကို နေရာအနှံ့မှာ တွေ့လာရပြီ။
“ဟာကွာ……..လုပ်ပြီ.. ငိုချင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားပြီ။ တခြားသီချင်းဆိုကြပါလား…
ဟိုတယောက် သီချင်းနားထောင်ရင် မလှုပ်တော့ဘူး.. အသက်မှရှိသေးရဲ့လား”
သုံးဆယ်ကျော်က တချက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားသည်။
“ဘယ်သူမှမဆိုနိုင်ကြဘူး။ သီချင်းရဲ့ တေးသွားနဲ့ စာသားတွေထဲမှ နစ်မျောသွားလို့ပါ”
“စာသားတွေက သိပ်လှတယ်နော်.. သံစဉ်ကိုတော့ မကြိုက်ဘူး”
“အသက် သုံးဆယ်ကျော်သွားရင် သံစဉ်တွေကိုပါ စွဲမက်လာလိမ့်မယ်”
“ဟုတ်တယ်.. လေးဆယ်ကျော်ရင် ပိုတောင် ကြိုက်ဦးမှာ”
လေးဆယ်ကျော်က ရယ်သံနှောပြီး ထောက်ခံလိုက်သည်။
“ကိုယ်တို့တော့ လေးဆယ်နားကပ်နေပြီ။ ခုထိ ခံစားလို့မရသေးဘူး”
အခန်းဝမှာ ရပ်နေတဲ့ သူက လှမ်းပြောသည်။
“တစ်ခြားဟာ ဖွင့်ကြ.. ဆိုမယ်…. ဘာလို့ သီချင်းဟောင်းတွေကြိုက်တာလဲ”
“ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့ တူရိယာတွေရဲ့ အသံတွေထဲမှာ၊ အတိတ်တွေထဲမှာ အိပ်မောကျချင်ကြလို့ ဖြစ်မယ်”
လေးဆယ်ကျော်က ကူရှင်ကို လက်နဲ့ ပိုက်ဖက်ရင်း မျက်စိမှိတ်နေခဲ့သည်။
သူတို့ ခံစားခဲ့တဲ့ သီချင်းစာသားလေးကို ဒီနေ့ တတိယကျမ်းစာ ထံမှာ မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ခဲ့ရသည်။
အခန်းတခါးကိုပိတ်၊ စပီကာတွေခဏပိတ်၊ အသံတွေမှန်သမျှ ခတ္တပိတ်ထားပြီး
ပန်းနွယ်က စိမ်း.... ပန်းနွယ်က စိမ်း.. စိမ်း...တယ်...
စုံနံ့သာမြိုင် ရှာပုံဖွင့်ပါလို့ရယ်... ရင်နင့်အောင် ချစ်ရှာလွန်းသူ အပူတပြင်း ရှာဖွေ... ရေမြေ ဆုံး... ဆုံးစေ့တကယ်.. လှဂမုံးနွယ် ချစ်သက်ဦးရယ်... ဘ၀တစ်ဆုံးတကယ် မပစ်ရက်ဘူးရယ်.. ရူးတယ်ဆိုစေဦးတော့.. ဖုန်းကျော့မေ ပန်းနွယ်ပျိုရယ် မဆုံးတော့လေ လှမ်းရွယ်ကာရယ် မုန်းတော့စေ ပန်းနွယ်ကညာရယ်...
(စိမ်းရက်တဲ့ ပန်းနွယ်ရေ.. စုံနံ့သာမြိုင်မှာ ရှာပုံဖွင့်သလို.. အသည်းနင့်အောင် ချစ်ခဲ့ရသူ.. ရေမြေဆုံးစေတော့ ရှာရလေဦးမယ်ကွယ်.. အရူးတစ်ယောက်ရယ်လို့များ ပြောချင်လည်း ပြောစေတော့... တောအလယ် တောင်အထပ်ထပ်မှာ မောတယ်ရယ်လို့တောင်မှ နားမနေခဲ့တဲ့သူပါ.. တောင်မြောက်လေးပါးကို ဖွေရှာမျှော်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့... အဖော်မရှိတဲ့ကိုယ့်ဘ၀မှာ အသည်းငယ်မိပြန်တယ်ကွယ်... ပျောက်သောသူ ရှာရင်တွေ့ဆိုပေမယ့် စိမ်းကားတဲ့ ပန်းနွယ်ကိုတော့ ရှာလေဝေးလေပါလား ပန်းနွယ်ရယ်)
မြိုင်ဗွေ.. သြော်..ဂနိုင်မြေထပ်မှာတဲ့... မှိုင်တွေ.. မှိုင်တွေ ရပ်ခါဖွဲ့... ဘယ်ဝယ်မြောက်တောင် ဖွေရောင်မျှော်ကြည့် အဖော်မရှိတစ်ကိုယ်တည်း.. အသည်းငယ်သလိုနှယ်... ပူပုံပန်းရယ် လွမ်းတယ်.. ပန်းနွယ်ရေ.. ကြာလေ ဝေး..တယ်...
သီတာမြအလား မြစ်နားတစ်လျောက် ရောက်ခဲ့ရာဝယ်.. လှိုင်းရေသောင်စပ်မှာ အတောင်ပံ ယှက်ပျံ ငှက်မောင်နှံကိုမှ မြင်ရသော်ခဏ သြော်.. မရွှင်ပျနိုင်တယ်... ရင်မှ လှိုက်လှဲ ပန်းနွယ်ကိုပဲ တလို့ ဆွေးမိတယ်.. ရွှေရင်ပူမီး ဗျာကြီးသူ သောကလှိုင်းဝယ်.. အချစ်ဇောနဲ့ နစ်မြောခဲ့ ဖြေမပြေတယ်...
အပြစ်ရှာသွေဖီ စိမ်းတဲ့ ပန်းနွယ်ရေ... လှမ်း.. လမ်းဘယ်မမြင်တယ်.. သြော် လှမ်း လမ်းဘယ်မမြင်တယ်.. ရွှေပင်လယ် ဆီးသလို နီး.. နီးမယ်မထင်တော့တယ်..
(ပန်းနွယ်ရေ.. မြသီတာ မြစ်အလွှာနားရောက်ပြန်တော့ လှိုင်းကလေးတွေ ပြေးတက်လာတဲ့ သောင်စပ်မှာ ငှက်မောင်နှံ တောင်ပံယှက်လို့ ပျံဝဲနေတာကို မြင်ရပြန်တယ်ကွယ်... အဲဒီအခါမျိုးမှာလည်း ပန်းနွယ်ကိုပဲ တွေးပြီး ဆွေးမိပြန်တာပေါ့... ဒါပေမယ့် အပြစ်ရှာသွေဖီပြေးတဲ့ ပန်းနွယ်ရေ... ရွှေပင်လယ်ကာဆီးလို့ နီးနိုင်မယ်မထင်ပေမယ့် ကမ္ဘာကုန်ကျယ်သရွေ့တော့ ရှာပုံချဲ့ရဦးမယ်)
ရင်မောဖွယ် ရှာပုံခရီးမှာဖြင့် ကမ္ဘာကုန်ကျယ်သရွေ့ ပြေးနိုင်စွမ်းလေဦးမယ်
ဘယ်သောအခါမှ ဆုံလာလိမ့်မယ်စိမ်းလေသူ ပန်းနွယ်ရယ်..
ကမ္ဘာမြေဆုံးအေင် ဖုန်းမောင် ဖွေရှာမယ်...
ပန်းနွယ်က စိမ်း.. စိမ်း...တယ်...
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:59 PM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : သီချင်းစာသား
ဇူလိုင်လထုတ် ဆယ်ကျော်သက် မဂ္ဂဇင်းမှာ ဝေမျှခြင်းခံရတဲ့ ကျွန်မရဲ့ “ချစ်သူ့အိမ်” နဲ့ “ကျွန်မချစ်တဲ့သစ်တစ်ပင်” အကြောင်း မေးနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ဆွေမျိုးများတွက်…
ကြားသာကြားရ မမြင်ရလို့ ရန်ကုန်က ၁၃နှစ်ကြာ ကွဲနေတဲ့ သူငယ်ချင်းဆီ ဖုန်းဆက်မေးတော့လဲ ကိုယ်တော်ချောက ဇွန်လထုတ်ကို ဖတ်ပြီး မတွေ့ဘူးပဲ ပြောနေတယ်…
ဘာညာ့ကို ပန်းသီးလေးတွေနဲ့ ချော့တောင်းတာလဲ သူက ဘာတွေ အလုပ်ရှုပ်နေတယ် မသိ…
ပျောက်တော်မူနေတယ်လေ… တခွိခွိ ရယ်တော်မူပြီး ပန်းသီးတွေသာ ပါသွားတယ်… ငပိချက် ချက်နေလားမသိ၊ လုံးဝပေါ်မလာတော့။
ကျန်တဲ့ ဘလော့ဂါ သူငယ်ချင်းတွေကလဲ သူ့ကိစ္စနဲ့သူ။
မဂျစ်က ၀မ်းလျောနေလို့ စကားတောင် မပြောနိုင်။ ကိုရန်က ရင်ဘတ်မှာ မြားစိုက်လို့ မလှုပ်နိုင်၊ မပန်ကလဲ ပေါက်ဆီနင်။ ကိုဂေါက်ကလဲ ပိုက်ကွန်ထဲက ထွက်မရ၊ ကိုဝေက ထောင်ချောက်ထဲမှာ ပိတ်မိ။ ကိုစိုးဇေယျကလဲ တောင်ပေါ်ရောက်နေ။ ကိုဖြိုးက နောင်တတွေ အကြီးအကျယ်ရနေ။
ဒါနဲ့ ပုံရိပ်ဘက်ကိုသွားတော့ အားပါး….ပုံရိပ်က မျောက်စိတ်ပေါက်နေချိန်နဲ့ တိုးနေတာနဲ့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ မမယ်လ်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်။ မမယ်လ်ကလဲ အောင်မြင်သူနဲ့ ရှုံးနိမ့်သူတွေကို အကြီးအကျယ် အယ်နာလိုက်ဇ်တွေလုပ်နေတာနဲ့ အလေးအနက်တွေ ခံစားလိုက်ရလို့ ကိုနေ့ဆီသွားပါတယ်…. သူကလဲ အကောင်ပလောင်တွေကို အကြီးအကျယ် အင်နာလိုက်ဇ် လုပ်နေတာနဲ့ တိုးနေပြန်ရော။
ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိလို့… ကိုပုဆီခရီးလှည့်တာ သူ့ကျမှ ပိုဆိုးနေတယ်.. တစ်ရေးမှလဲ မအိပ်ရသေးဘူးတဲ့ မှောင်ကလဲ မှောင်လွန်းလို့ ရင်ထဲမှာ မကျေနပ်ဘူးတဲ့ အော်သံကြီး အဝေးကြီးထဲက ကြားတာနဲ့ လန့်ပြီး ကိုစစ်အိမ်ဆီသွားတယ်။ သူကလဲ ဘလော့တင်းပလိပ်ပြင်နေလို့ တစ်ညလုံးမအိပ်ရသေးဘူးတဲ့။ ဘာလို့ ဘလော့ဂါတွေ မအိပ်ကြပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားရင်း ကိုစေးထူးဆီသွားတယ်… ဟယ်…သူကတော့ တစ်ယောက်ထဲ ပါတနာမပါဘဲ အကြီးအကျယ် ဒန့်စ်လုပ်နေလေရဲ့။ မမေဓာဝီဆီ ခရီးဆက်တော့ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးပိုစ့်က ပြီးပါပြီရှင်ဆိုတဲ့ ချစ်စရာ အသံလေးကြားပြီး ဘာမှ မမေးချင်၊ မနှောက်ယှက်ချင်တော့ဘူး။
စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ကိုပရိုဂရမ်မာဆီ ခရီးဆက်တာ…အို……. မျက်စိခြေရာကိရိယာတွေ တွေ့လာတာနဲ့ အရမ်းလန့်ပြီး မျက်နှာခေါင်းငုံ့ ထွက်လာခဲ့တယ်။ လမ်းမှာ လမ်းလျှောက်ထွက်နေတဲ့ ကိုညီညီ သံလွင့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေ ကို အိမ်ပြန်ပို့ပေးရသေးတယ်။
ကိုတက်စ်လာ ထံမှ ရရှိလာပါတယ်…
မြန်မာပြည်နဲ့ အနီးဆုံးမှာလို ခံစားလိုက်ရတယ်…
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:50 AM6comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ဖူးငုံ (ဆယ်ကျော်သက် မဂ္ဂဇင်း)